हितेन्द्रदेव शाक्य विद्युत प्राधिकरणमा काज फिर्ता हुँदै, निमित्त प्रमुख पाउने ! - बडिमालिका खबर
हितेन्द्रदेव शाक्य विद्युत प्राधिकरणमा काज फिर्ता हुँदै, निमित्त प्रमुख पाउने !
२२ कात्तिक, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणमा काज फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा मन्त्री पुनले ‘एनईए इञ्जिनियरिङ कम्पनी’मा काजमा रहेका शाक्यलाई प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिरी गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।
योसँगै अब प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले आइतबार नै शाक्यलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए । शाक्य प्राधिकरणमा हाजिर भएपछि मन्त्री पुनले उनलाई नै कायममुकायम वा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
हाल निमित्त कार्यकारी निर्देशक रहेका कोइराला शाक्यभन्दा कनिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक हुन् । शाक्य र कोइरालाको एउटै ब्याचमा १२औं तहका लागि बढुवा भएपनि ११ औं तहमा शाक्यको बढुवा कोइरालाको भन्दा छिटो भएको थियो । त्यसैले बरिष्ठतामा शाक्य कोइरालाभन्दा माथि छन् ।
शाक्यले हाल नेतृत्व गरिरहेको एनईए इन्जिनियरिङ प्राधिकरणको भगिनी कम्पनी हो । परामर्श एवम् इञ्जिनियरिङ सेवामा विदेशिने रकम जोगाउन भन्दै २०७३ मा स्थापित कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशकका रुपमा काम गर्न कुलमान घिसिङले नै शाक्यलाई पठाएका थिए ।
शाक्य प्रसारणलाइनका जानकार मानिन्छन् । उनी २०७३ अघि अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तरगत तयारी चरणको परियोजनामा पनि खटिएका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले शाक्यलाई रुचाएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
शाक्य प्राधिकरणमा आए एमसीसीको पक्षमा प्राधिकरणको नेतृत्वले नै बोल्ने विश्वास सरकारको छ । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एमसीसी परियोजनाको प्राविधिक आवश्यकताको विषयबारे बोले पनि राजनीतिक विषयमा आफू नबोल्ने बताएका थिए ।
तर, उपकार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने परियोजनाबारे सञ्चार माध्यममा बोल्ने गरेका छन् । प्राधिकरणबाट घिसिङ बाहिरएपछि शाक्यले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफ्नो दावेदारी रहेको बताएका थिए ।
पूर्वको इलाम बजार स्थायी घर भएका शाक्यले बिई गरेका छन् । सम्भवतः आगामी हप्ताबाटै उनले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।
जीप दुर्घटनामा बैतडीमा एकको मृत्युु, एक घाइते जीप दुर्घटनामा बैतडीमा एकको मृत्युु, एक घाइते